အိန္ဒိယနိုင်ငံက စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် နောက်ထပ် COVID-19 ရောဂါလှိုင်း အသစ်ဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရ - Xinhua News Agency
နယူးဒေလီ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအား ထိန်းသိမ်းထားနေစဉ် နောက်ထပ် COVID-19 ရောဂါလှိုင်းတစ်ခုအား ရင်ဆိုင်တိုက်ဖျက်နေရကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် နာရန်ဒြာမိုဒီက ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် ညနေ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။“ကိုရိုနာအချိန်ကာလကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီကနေ့ပြောနေသလိုပဲ အိန္ဒိယဟာ ကပ်ရောဂါတတိယလှိုင်းကို ရင်ဆိုင်ကိုင်တွယ်နေရတယ်” ဟု ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (WEF) အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး၌ မိုဒီက ပြောခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် နိုင်ငံအတွင်း “စီးပွားရေး လွယ်ကူစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး” မြှင့်တင်ရန် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ကြောင်း မိုဒီက ပြောခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၁.၆ ဘီလီယံနီးပါး ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
“COVID-19 ကာလတွေတုန်းက နိုင်ငံတွေကို ဆေးဝါးတွေပေးပို့ခြင်းဖြင့် လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယ၏ ‘One Earth, One Health’ ရူပါရုံကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု မိုဒီက ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် မူဝါဒများချမှတ်ခြင်း၊ လက်ရှိအချိန်အပြင် လာမည့် ၂၅ နှစ်၏ ပန်းတိုင်များကို အာရုံစိုက်လျက် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
“ဒီကာလမှာ အိန္ဒိယက လူမှုဖူလုံရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးပြည့်ဝရှိပြီး တိုးတက်မှုမြင့်မားတဲ့ ပန်းတိုင်တွေ ချမှတ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီတိုးတက်မှုကာလက စိမ်းလန်းမယ်၊ သန့်ရှင်းမယ်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိပြီး ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိမယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်က “အိုမီခရွန်ဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း မသေချာမှု ဆက်လက်ရှိနေခြင်းကြောင့်” Davos မြို့၊ Swiss ski အပန်းဖြေစခန်းတွင် ပြုလုပ်နေကျ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို ရွှေ့ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယခင်လက ကြေညာခဲ့သည်။ ကနဦးက ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသော အစည်းအဝေးအား ယခုအခါ နွေရာသီအစောပိုင်း၌ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိ ပြုလုပ်မည့် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး၌ ပါဝင်တက်ရောက်သူများသည် ကမ္ဘာ့ဖိအားအများဆုံး စိန်ခေါ်မှုများအတွက် အဖြေရှာရန် အာရုံစိုက်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
2022-01-18 12:18:45 Category：Politics, Law
NEW DELHI, Jan. 18 (Xinhua) — Indian Prime Minister Narendra Modi Monday evening said India is fighting another COVID-19 wave with full alertness and caution while maintaining economic growth.
“We used the corona time for reforms. India is dealing with the third wave of pandemic as I speak to you today,” Modi said while addressing the 2022 World Economic Forum (WEF) virtual session.
Modi said India has carried outahost of economic reforms to improve the “ease of doing business” in the country, and it was the best time to invest in India.
In the past year, India has administered nearly 1.6 billion COVID-19 vaccine doses, he said.
“In the times of COVID-19, we saw India’s vision of ‘One Earth, One Health’ which helped save millions of lives by sending medicines to countries,” Modi said.
He said India at present was making policies, taking decisions regarding the present as well as the goals of the next 25 years.
“In this period, India has set the goals of high growth,asaturation of welfare and wellness. This period of growth will also be green, it will also be clean, it will also be sustainable, it will also be reliable,” he said.
Last month, the WEF announced that due to the “continued uncertainty over the Omicron outbreak,” it will defer its annual meeting, which is usually held in the Swiss ski resort of Davos. Initially scheduled to take place from Monday to Friday, the meeting is now planned for early summer.
Instead, participants are brought together to joinavirtual session from Monday to Friday, which focuses on finding solutions to the world’s most pressing challenges. Enditem
Photo : A health worker takesanasal swab sample fromapassenger for COVID-19 testing at the airport in Prayagraj District of Uttar Pradesh, India, Aug. 13, 2021. (Str/Xinhua)